ASA SOA ATAON’NY TERATANY KARANA : Nanome fanitso ireo niharam-boina teny Aranta ny AZOI
Fanitso maromaro no nomen’ny fikambanana AZOI na Amicale Zanatany d’Origine Indienne eto Mahajanga, ireo olona may trano teny Anranta, ny herinandro lasa teo. Anisan’ny fampanantenana nomen’izy ireo io nataony io. 8 juillet 2017
Nanome toky koa ireo mpikambana ao fa hanome trano fivoahana manara-penitra maromaro ny mponina ao rehefa vita ny fanorenan’izy ireo ny tranony mba ho ara-pahasalamana ny fonenany ary tsy hiparitaka ny maloto. Efa fantatry isam-pokontany amin’ny asa soa ataony ny fikambanana AZOI tarihin’i Aziz Asgaraly.
Zaza miisa 100 sy beantitra miisa 50 no omen’izy ireo sakafo masaka isan-kerinandro. Mifandimby ireo Fokontany amin’izany ka efa nandalovana faninefany avokoa ireo Fokontany miisa 26 eto Mahajanga. Isaky ny manao asa soa ity fikambanana ity dia miantso manampahefana eto an-toerana sy fikambanana hafa hiaraka amin’izy ireo manolotra izany.
Anisan’ny efa nanotrona azy ireo ny ao amin’ny prefektiora, ny biraom-paritry ny Mponina, ireo fikambanan’ny vadin’ny Polisy sy ny maro hafa…Efa nanatrika ny asa fanaon’izy ireo ihany koa ny ao amin’ny mpiandraikitra ny mpitsoa-ponenana ao amin’ny Firenena mikambana. Ankoatra ireo asa soa efa fanaony isan-kerinandro dia maro ihany koa ny Fokontany nahazo fitaovana. Ny ao Manjarisoa ohatra dia nahazo labasy lehibe fanao tafo, fitaovana sy kojakoja an-dakozia fampiasa amin’ny fahoriana sy hafaliana. Ny fikambanam-behivavy ao amin’ny Fokontany Abattoir indray dia nahazo masinina fanjairana miisa efatra. Ny Fokontany Tsaramandroso ambany koa dia efa nahazo labasy lehibe.